Heerka Exchange, sheegyada
Heerka sarrifka Historical ee dhammaan lacagaha adduunka tan iyo 1992 ilaa maanta. gooldhalinta sarrifka lacagaha loogu talagalay sanad walba, bil iyo 20 sano ee u dambeeyey.
Heerka sarrifka Dibadda
Australiyaanka dollar Bahrain Diinaar
Baht Thai Balboa Panama
Bhutan ngultrum Birr Itoobiya
Boliviano Bolivia Boqalaal Malta
Boqalaal New Turkish Bosnia iyo Herzegovina sumadda bedeli
Botswana pula Brunei dollar
Burundi oo faran CFC faran
Cordoba Nicaraguan Costa Rica colon
Cyprus pound Dalasi Gambia
Denar Makedoniya Deutsche sumadda
Dhab Brazil Diinaar Algerian
Diinaar Ciraaq Diinaar Kuwaiti
Diinaar Liibiya Diinaar Serbian
Diinaar Tunisia Diinaar cusub Yugoslaviyadii
Dirham Morocco Dollar Bahamian
Dollar Canadian Dollar Caribbean East
Dollar Jamaica Dollar Namibia
Dominican peso Dram Armenian
Faran Belgian Faran Comoran
Faran Congo Faran Faransiis Pacific
Faran Guinea Faran Jabuuti
Faran Rwanda Faran Swiss
Fiji dollar Filibiin peso
France bashaash Fuerte Boliver Venezuela
Gourde Haitian Guernsey pound
Gulden Antilliaanse Guraani
Iceland krone Iya Manaatadii Azerbaijan
JDS (Special xuquuqda barbaro) Jersey pound
KUNA Croatian Kazakhstani tenge
Kenya oo shilin Kina
Kroon Istooniyaan Kroon Swedish
Kwanza cusub Angola Kyat Burma
Laawiyiintii Bulgarian Lao Kip
Lari Joorijiyaan Latvia laat
Leu Moldova Leu Romania
Lire Talyaani Litas Lithuanian
Loti Lumiso Greek
Manx pound Mauritius qoondayn
Metical Mozambique Naire Nigeria
New Zealand dollar Oo shilin Soomaali
Ouguiya Mauritanian Ounce 1 troy dahab ah (oo dahab electronic / dahab electronic)
Pa`anga Pakistan qoondayn
Pataca Macanese Peseta Spanish
Peso Argentine Peso Chile
Peso Colombian Peso Cuba
Peso Mexico Peso Uruguay
Pound Irish Pound Lubnaan
Pound Masaarida Pound South Sudan
Pound Sudan Pound Suuriya
Qoondayn Hindiya Qoondayn Nepal
Quetzal Guatemala Rand
Riel Kamboodiya Riyaalka Cumaan
Riyaalka Iran Riyaalka Yemen
Ruble Belarus Ruble Ruush
Rufiyaa Maldivian Rupiah Indonesian
Saint Helena pound Sao Tome iyo Principe dobra
Seeraar Seychelles qoondayn
Sheqelka cusub Israel Shilin Austria
Shilinka Tansaaniya Singapore dollar
Sri Lanka qoondayn Sterling pound
Sulaymaan Islands dollar Sumadda balan kalluun
Taaj Danish Taiwan dollar cusub
Tala Tolar Slovenia
Trinidad and Tobago dollar Tugrik Mongoliyaan
Turkmenistan Manaatadii Turkmenistan Manaatadii cusub
Uganda oo shilin Urdun Diinaar
Uzbekistan wadarta Vanuatu vatu
Vietnamesse dong Won South Korean
Won Waqooyiga Kuuriya Yen
Zimbabwean dollar Zloty Polish
1 ounce troy oo lacag ah
Si aad u sareysa ee liiska ee heerka sarrifka
Sicirka sarrifka iyo xigashooyinka 2020.
Halkan waxaad ka ogaan kartaa sicirka lacag kasta maalin kasta. Halkan waxaad ka ogaan kartaa sicirka lacag kasta maalin kasta. Taariikhda adduunka Oo shilin Soomaali sicirka sarrifka ee 2020 maalin kasta.
Qiimaha sarrifka lacagaha, xigashada lacagta adduunka ee 2019.
Taariikh dhameystiran oo ka soo xigashada qiimaha lacagta maalinle ah. Taariikh dhameystiran oo ka soo xigashada qiimaha lacagta maalinle ah. Isweydaarsiga qiimaha iyo xigashooyinka 2019 maalin kasta.
Qiimaha sarrifka iyo xigashada lacagaha adduunka ee 2018.
Taariikhda qiimaha xigashooyinka maalin kasta oo ah 2018. Taariikhda qiimaha xigashooyinka maalin kasta oo ah 2018. Kaydinta xogta sarrifka taariikhda.
Xigashooyinka iyo qiimaha sarrifka lacagaha adduunka ee 2017.
Kaydinta xogta sarrifka taariikhda. Kaydinta xogta sarrifka taariikhda. Taariikhda sarrifka lacagta adduunka ee 2017 maalin kasta.
Sicirka sarrifka iyo xigashooyinka 2016.
Qiimaha sarrifka maalinta saxda ah ee 2016. Qiimaha sarrifka maalinta saxda ah ee 2016. Halkan waxaad ka ogaan kartaa sicirka lacag kasta maalin kasta.
Sicirka sarrifka iyo xigashooyinka 2015.
Taariikhda sicirka lacagta adduunka maalin walba. Taariikhda sicirka lacagta adduunka maalin walba. Maalin kasta Oo shilin Soomaali sicirka sarrifka (xigasho) loogu talagalay 2015.
Taariikhda sicirka sarrifka iyo oraahda 2014.
Taariikhda sicirka lacagta adduunka maalin walba. Taariikhda sicirka lacagta adduunka maalin walba. Taariikhda sarrifka lacagta adduunka ee 2014 maalin kasta.
Xigashooyinka iyo qiimaha sarrifka lacagaha adduunka ee 2013.
Taariikhda qiimaha xigashooyinka maalin kasta oo ah 2013. Taariikhda qiimaha xigashooyinka maalin kasta oo ah 2013. Heerka sarrifka ama xigashooyinka Oo shilin Soomaali ee loogu talagalay 2013 ee bil kasta iyo maalin kasta.
Taariikhda xigashooyinka iyo qiimaha sarrifka ee 2012.
Taariikh dhameystiran oo ka soo xigashada qiimaha lacagta maalinle ah. Taariikh dhameystiran oo ka soo xigashada qiimaha lacagta maalinle ah. Taariikhda qiimaha xigashooyinka maalin kasta oo ah 2012.
Qiimaha sarrifka iyo xigashada lacagaha adduunka ee 2011.
Heerka sarrifka ama oraah sheegashada lacagaha adduunka ee 2011 ee bil kasta iyo maalin kasta. Heerka sarrifka ama oraah sheegashada lacagaha adduunka ee 2011 ee bil kasta iyo maalin kasta. Kaydinta xogta sarrifka taariikhda.
Sicirka sarrifka iyo xigashooyinka 2010.
Taariikhda sicirka lacagta adduunka maalin walba. Taariikhda sicirka lacagta adduunka maalin walba. Heerka sarrifka ama xigashooyinka Oo shilin Soomaali ee loogu talagalay 2010 ee bil kasta iyo maalin kasta.
Qiimaha sarrifka lacagaha, xigashada lacagta adduunka ee 2009.
Taariikhda sarrifka lacagta adduunka ee 2009 maalin kasta. Taariikhda sarrifka lacagta adduunka ee 2009 maalin kasta. Taariikhda sarrifka lacagaha oo dhan.
Taariikhda xigashooyinka iyo qiimaha sarrifka ee 2008.
Taariikhda sicirka lacagta adduunka maalin walba. Taariikhda sicirka lacagta adduunka maalin walba. Taariikhda sarrifka lacagta adduunka ee 2008 maalin kasta.
Qiimaha sarrifka lacagaha, xigashada lacagta adduunka ee 2007.
Isweydaarsiga qiimaha iyo xigashooyinka 2007 maalin kasta. Isweydaarsiga qiimaha iyo xigashooyinka 2007 maalin kasta. Kaydinta xogta sarrifka taariikhda.
Qiimaha sarrifka iyo xigashada lacagaha adduunka ee 2006.
Heerka sarrifka ama xigashooyinka Oo shilin Soomaali ee loogu talagalay 2006 ee bil kasta iyo maalin kasta. Heerka sarrifka ama xigashooyinka Oo shilin Soomaali ee loogu talagalay 2006 ee bil kasta iyo maalin kasta. Taariikhda qiimaha xigashooyinka maalin kasta oo ah 2006.
Xigashooyinka iyo qiimaha sarrifka lacagaha adduunka ee 2005.
Oo shilin Soomaali sicirka sarrifka iyo xigashooyinka 2005 maalin kasta. Oo shilin Soomaali sicirka sarrifka iyo xigashooyinka 2005 maalin kasta. Kaydinta xogta sarrifka taariikhda.
Xigashooyinka iyo qiimaha sarrifka lacagaha adduunka ee 2004.
Taariikhda Oo shilin Soomaali xigashooyinka maalin kasta oo ah 2004. Taariikhda Oo shilin Soomaali xigashooyinka maalin kasta oo ah 2004. Waxaan haynnaa taariikhda dhammaan lacagaha mayl maalin kasta.
Sicirka sarrifka iyo xigashooyinka 2003.
Taariikhda Oo shilin Soomaali xigashooyinka maalin kasta oo ah 2003. Taariikhda Oo shilin Soomaali xigashooyinka maalin kasta oo ah 2003. Qiimaha sarrifka maalinta saxda ah ee 2003.
Qiimaha sarrifka lacagaha, xigashada lacagta adduunka ee 2002.
Taariikhda sarrifka lacagaha oo dhan. Taariikhda sarrifka lacagaha oo dhan. Maalin kasta Oo shilin Soomaali sicirka sarrifka (xigasho) loogu talagalay 2002.
Sicirka sarrifka iyo xigashooyinka 2001.
Taariikhda sarrifka lacagaha oo dhan. Taariikhda sarrifka lacagaha oo dhan. Oo shilin Soomaali sicirka sarrifka iyo xigashooyinka 2001 maalin kasta.
Xigashooyinka iyo qiimaha sarrifka lacagaha adduunka ee 2000.
Waxaan haynnaa taariikhda dhammaan lacagaha mayl maalin kasta. Waxaan haynnaa taariikhda dhammaan lacagaha mayl maalin kasta. Maalin kasta Oo shilin Soomaali sicirka sarrifka (xigasho) loogu talagalay 2000.
Xigashooyinka iyo qiimaha sarrifka lacagaha adduunka ee 1999.
Taariikhda qiimaha xigashooyinka maalin kasta oo ah 1999. Taariikhda qiimaha xigashooyinka maalin kasta oo ah 1999. Taariikhda Oo shilin Soomaali xigashooyinka maalin kasta oo ah 1999.
Taariikhda sicirka sarrifka iyo oraahda 1998.
Heerka sarrifka ama xigashooyinka Oo shilin Soomaali ee loogu talagalay 1998 ee bil kasta iyo maalin kasta. Heerka sarrifka ama xigashooyinka Oo shilin Soomaali ee loogu talagalay 1998 ee bil kasta iyo maalin kasta. Taariikhda sicirka lacagta adduunka maalin walba.
Qiimaha sarrifka lacagaha, xigashada lacagta adduunka ee 1997.
Kaydinta xogta sarrifka taariikhda. Kaydinta xogta sarrifka taariikhda. Heerka sarrifka ama xigashooyinka Oo shilin Soomaali ee loogu talagalay 1997 ee bil kasta iyo maalin kasta.
Taariikhda sicirka sarrifka iyo oraahda 1996.
Taariikhda sicirka lacagta adduunka maalin walba. Taariikhda sicirka lacagta adduunka maalin walba. Oo shilin Soomaali sicirka sarrifka iyo xigashooyinka 1996 maalin kasta.
Qiimaha sarrifka lacagaha, xigashada lacagta adduunka ee 1995.
Qiimaha sarrifka maalinta saxda ah ee 1995. Qiimaha sarrifka maalinta saxda ah ee 1995. Kaydinta xogta sarrifka taariikhda.
Xigashooyinka iyo qiimaha sarrifka lacagaha adduunka ee 1994.
Taariikh dhameystiran oo ka soo xigashada qiimaha lacagta maalinle ah. Taariikh dhameystiran oo ka soo xigashada qiimaha lacagta maalinle ah. Oo shilin Soomaali sicirka sarrifka iyo xigashooyinka 1994 maalin kasta.
Xigashooyinka iyo qiimaha sarrifka lacagaha adduunka ee 1993.
Taariikhda qiimaha xigashooyinka maalin kasta oo ah 1993. Taariikhda qiimaha xigashooyinka maalin kasta oo ah 1993. Waxaan haynnaa taariikhda dhammaan lacagaha mayl maalin kasta.